Sina tsy tantera-drano sy faharetan'ny orinasa mpamokatra taratasy synthetic PP | Shawei
Labels vita amin'ny kodiarana
Tsy tantera-drano sy mateza ny taratasy sentetika PP
Fanontam-pirinty: tsara sy milamina ny etan'ny vokatra, ary kanto ny endriny. Ny fanaovana pirinty ny taratasy sentetika dia tena tsara sy maranitra, izay tsy ampitahaina amin'ny an'ny vokatra taratasy tsotra. Azo ampiasaina amin'ny afisy, dokam-barotra, katalaogy ary vokatra hafa misy takiana avo lenta izany.
Fampisehoana pirinty: taratasy sentetika, ny fikirakirany dia tena tsara, amin'ny resaka fanontana, na ny inking, ny fanamainana, ny fametahana dia tena tsara. Azo ampiasaina ny ranomainty ankapobeny. Ankoatry ny lithography, dia azo ampiasaina amin'ny fanontana, gravure ary fanontana amin'ny efijery.
Fahombiazana amin'ny fanoratana tsara: noho ny pores micro namboarina manokana ety ambonin'ny tany dia milamina ny fanoratana ary milamina ny firafitra izay afaka manolo ny kahie, boky ary ny boky ho an'ny fanoratana ankapobeny.
Fananana tantera-drano matanjaka: ny taratasy sentetika PP dia manana fananana feno tantera-drano, izay afaka misoroka ny fiasan'ny vokatra ankapobeny amin'ny taratasy mitaky fanodinana ny sarimihetsika miaro; Ity vokatra ity dia tsy vitan'ny tantera-drano sy hamandoana fotsiny, fa koa manana ny tampon'ny zavona sy ny sary mamirapiratra amin'ny taratasy. Azo ampiasaina amin'ny fonony boky, afisy ivelany, dokam-barotra, marika tsy tantera-drano, marika voninkazo, karatra sns. Tsara tarehy izy io, mateza ary afaka mamonjy ny vidin'ny sarimihetsika.
Ny vokatra dia miorina amin'ny hamandoana, mahazaka fihodinana, tsy mora miova endrika, tsy mora mivadika mavo sns. Ho an'ireo vokatra mila tehirizina mandritra ny fotoana lava, toy ny boky, afisy ary boky mirakitra boky ary katalaogy izay mila vakiana matetika, toy ny katalaogin-damba, katalaogin'ny fanaka, famandrihana sy tsihy fisakafoanana dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra fotoana ary ara-toekarena.
Snow (fitaratra) taratasy sentetika varahina (BCP / BCA)
Fampiasana: sarintany, rakotra boky, katalaogy, kalandrie, kalandrie isam-bolana, marika, kitapo, fanontana dokam-barotra, sns.
Hateviny: 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm
Taratasy synthetic card (BCC)
Fampiasana: mpankafy, tabilao fametahana, tsihy fisakafoanana, rakotra rakotra rakotra rakotra boky, fonosana boky, karatra VIP vovoka famantaranandro, fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy, famantarana, boaty famonosana, Cancag, paipaipai.
Hateviny: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm
Fotoana fandefasana: Jan-05-2021
Mpitantana ny varotra departemanta iraisam-pirenena: SW Label
Tsy tantera-drano sy mateza ny synthetic PP ...
Misaotra anao nandefa anay ny vaovao ary hifandray aminao izahay raha vantany vao mety